Kulesi sihloko, sizogxila biography of omunye abantu abacebe kakhulu emhlabeni. Kuyinto Countryman wethu, ongowokuzalwa e-Moscow - Vladimir Potanin.
UVladimir wazalwa Januwari 3, 1961 enhloko-dolobha yase-USSR emkhayeni ukuhweba ummeleli we-Soviet Union e-New Zealand. Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme wangena Faculty of Economics of MGIMO, okuyinto wathola iziqu ngo-1983.
Ngokwenkolelo "elihle" abasekeli iziza ugobe, kucatshangwa ukuthi abantu cishe yonke kuphumelele, ocebile futhi onethonya eRussia futhi emhlabeni ovelele ubuzwe abangamaJuda. UVladimir Potanin futhi ivame yachazwa njengetshe elincane Mason, ejenti Zionist, nokunye. Nokho, langempela waqinisekisa ulwazi mayelana izimpande zamaSemite uVladimir Olegovich cha. UVladimir Potanin, biography, ubuzwe kanye ukuphila kwakhe siqu kukhona ulwazi umphakathi, yaqashelwa ngokomthetho njengezwe Russian.
Ngemva nje kancane kwalokho, ngemva kokuphothula sikhungo, uVladimir Potanin atholwe ubulungu CPSU Party futhi wasebenza wobunjiniyela e Soyuzhimeksport. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba ngo-1990, lapho insizwa ethile wahlanganyela IBEC - International Bank for Economic Cooperation. Futhi ngo-1991, wathatha indawo umongameli Foreign Economic Association "Interros".
Izinyathelo zokuqala kwezamabhizinisi
Ngo 1992-1993, uVladimir Potanin, kwaba iphini likamengameli, futhi ngaleso sikhathi owayengumongameli we IFC kanye ebhange, okuyinto bekake wadala. Wacabanga likaMengameli we JSCB "ONEXIM Bank" kusukela ngo-1993. Kusukela ngo-1995, abezindaba ngenkuthalo okuxoxwe indali zifake eqhutshwa Potanin. Waphawula ukuthi waphishekela letinhloso ezimbili, okuyinto ukuthola abanikazi ngendlela efanele kwamabhizinisi kanye ekuheheni izimali endaweni yomcebo. Kulezi izindali, uVladimir Potanin ngokusebenzisa IFC kanye "ONEXIM Bank" aluthola ukwabelana isimo "eSiberia-Far Eastern Oil Company", "Norilsk Nickel", "Novorossiysk Inkampani yokuthumela" "Novolipetsk Steel" futhi "North-Western Inkampani yokuthumela."
Ngo-1996, Potanin baba iphini likamengameli we-Association of amaqembu zezimali nezezimboni. Ngawo lowo nyaka kokuba yingxenye umhlangano ke-uMongameli Boris Yeltsin we Russian Federation neqembu osopolitiki kanye bebhange, umphumela owawungumnyaka ukusungulwa iqembu kohlaziyo ngesikhathi umkhankaso indlunkulu. iqembu Headed Anatoliy Chubays. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, uVladimir Potanin, waklonyeliswa nguMongameli ukwesekwa akhe asebenzayo of umkhankaso wakhe wokhetho.
The Case of AvtoVAZ
Ngo-August 1996 Potanin sathola ithuba babe iPhini likaSihlalo lokuqala uhulumeni waseRussia. Umsebenzi wakhe ukuba bengamele ukuqala kokusetshenziswa kwe-Bloc kwezomnotho. UNgqongqoshe Umnotho ikwamukele ukuqokwa, kanye usihlalo we-Central Bank. Ngesikhathi esifanayo, wahlanganyela kunjalo ucabanga of AvtoVAZ. UMbuso omkhulu izikweletu yangaphandle (mayelana ezintathu isigidintathu ruble) ezisengozini kuvalwe ibhizinisi, kodwa wakwazi ukubaleka.
Ngo-March 1997, uVladimir Potanin, yaxoshwa sephini usihlalo lokuqala uhulumeni, futhi ngo-May, waphinda wahola "ONEXIM Bank". Esikhathini "okusha Izindaba" kwabikwa ukuthi Potanin unqume ukusebenzisa umongameli okhethweni olulandelayo. Ngo-April 1998, washiya "ONEXIM Bank" ukuba ihole la ebambe "Interros", ekuhlanganiseni ngaphansi "Norilsk Nickel", "SIDANCO" nemikhiwane "Interros". Entwasahlobo elandelayo, enye imidiya wabhala ukuthi ezenziwa ezimbonini izinkampani eliyifa enikeziwe ezingaphezu kuka-4% we-GDP waseRussia nasemaceleni 7% lemikhiqizo inani.
Inqubekela phambili kanye kuyanda
Julayi 1998 ukhunjulwa, phakathi kwezinye izinto, yokuthi uVladimir Potanin, ogama biography ugcwele oxhumana nabo isimo sezombusazwe, wenza isitatimende eqinile maqondana iziphathimandla ngesimo sezomnotho ezweni. Phakathi kwezinye izinto, akuchaza ngokuthi "ihlaya" kwenqubomgomo kahulumeni eyayilwa abantu, futhi wathi uma hhayi ngokushesha baqala ukuxazulula izinkinga zomnotho isimo hhayi kabusha izindlela zokuvikeleka komphakathi, izwe kungaba ukusungula uhulumeni wobushiqela noma yini enye.
Ngo-2001, ngaphansi kobuholi buka "Interros" ukukhathazeka "Amandla Machines" sidaliwe. Le nkampani ihlanganisa eziningi izinkampani, ezifana Leningrad Metal Plant, ephendulwa Blades Plant, "LMZ-Engineering" nabanye. Ngawo lowo nyaka waphinde wahamba ezinhlakeni zikahulumeni. UVladimir Potanin, oxhumana yakhe uhulumeni siqiniswe ubulungu kuMkhandlu Entrepreneurship at uhulumeni waseRussia. Khona-ke ngokusebenzisa "Interros" sekudayiswe eziningi zikawoyela abese empeleni abuqede ebhizinisini likawoyela.
Ngo-2003 Potanin wakhethwa ukuba ngibe usihlalo weNational Council kwebhizinisi. lokhu Izinjongo umzimba yokuthuthukisa zokuziphatha futhi isilinganiso Yebhizinisi waseRussia. Ngawo lowo nyaka wathatha ingxenye esithangamini, hlanganani abasekeli nabalandeli beqembu elibusayo. Ngaphezu kwalokho, ngo-July nonyaka ke kwaphawulwa kakhulu okwenziwayo ezinkulu, okuholele "Interros" wathenga yonke izakhiwo commercial Aleksandra Smolenskogo. Lezi zilimi zazihlanganisa iqembu amabhange nezinye izinkampani eziningana. "Kommersant" iphephandaba uye Kulinganiselwa deal njengoba ngobukhulu emlandweni ezifuywayo uhlelo yasebhange ukumuncwa ubambe abanye kulowo mkhakha.
Ngo-2005, uVladimir Potanin waphinda wabeka ukugxekwa uhulumeni. Kulokhu, lesi senzakalo wakhonza njengephayona izithiyo zokuphatha kanye namazinga ezibucayi zenkohlakalo, kungani iphazamiseke ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane naphakathi. Ngaphandle kwalokho, Potanin kwaphawulwa yokuthi ukuziphatha okuphoqelelayo kakhulu uHulumeni emnothweni. Ngawo lowo nyaka, Potanin yaba ilungu Public Chamber, okuyinto eyaba usihlalo walo myalo ekubhekaneni nezindaba wokuzithandela nokusebenzela ukusiza abanye.
Ngo-2007, "Interros" wamemezela ukuqala ukuhlelwa kabusha sina, okwaphumela Potanin kwakudingeka ayeke ngokubambisana neNhlangano umlingani zako ezisemqoka Mihailom Prohorovym, ngaleso sikhathi labetibambile sihlalo we General Umqondisi "Norilsk Nickel". Ngaphansi kohlelo, Prokhorov, kokuqeda eziningi ezisaqhubeka, kufanele batjhiye phasi iinkhundla zabo ekhanda, ngesikhathi esifanayo ukuthengisa impahla "Interros" ukwabelana wakhe kule nkampani. Potanin, ngoba ingxenye yayo, athengise ngakho konke yezimpahla eziningi izinkampani amandla ne-hydrogen "Interros" Prokhorov, kangangokuba wayengeke kamuva ukudala inkampani yakhe.
Ngo-2006, isimo Potanin ifinyelele uphawu 6.4 dollar ayizigidi eziyinkulungwane. Ubizwa bahileleke umsebenzi wokusiza abantu. Ikakhulukazi, ukwaba izimali on ukuthuthukisa i Hermitage. Ngaphezu kwalokho, babenikela ayisigidi Museum Isikhwama Russia wakwazi sithengisise "Black Square" by Malevich, okuyinto eyaba umphathi wokusebenza we Hermitage. Potanin atshalwe ukuhlonywa kwe-Orthodox-University of Humanities futhi eziningi nezinye amaphrojekthi isonto, okuyiwona wathola umklomelo ezintathu zesonto - Order of St Prince uVladimir II no III kanye Order of St uSergiyu III degree. Kodwa esikhathini eside ngaphambi kokuba lokho, ngo-1995, he was fike of abasunguli "Ubunye Orthodox Abantu Isikhwama." Iphawula ngezimbangela isitayela sakhe sa, waphawula ukuthi isimo kufanele ayeke ubuka kokubili labawakhayo izigebengu abazama kuhlawulelwe ngenxa yobugebengu baso.
Zonke izinhlelo yesihle ngumuntu isikhwama esikhethekile, okuyinto kusungulwa uVladimir Potanin. Ikheli lesikhungo: Moscow, Bolshaya Yakimanka.
Ngo-2007, Potanin baba lo somabhizinisi bokuqala abake baklonyeliswa Order French Wezobuciko Izincwadi. Lo mklomelo yena yanikezelwa ngoba kokufaneleka kwakhe ukuthuthukiswa inkhulumomphendvulwano ngemasiko phakathi Russia nase France. Kamuva Potanin uye besekele nokuthuthukiswa kwengqalasizinda ehhotela Sochi kanye nokwakhiwa zemidlalo wokulungiselela imidlalo yama-Olympic.
UVladimir Potanin: uthando ukuphila
Ekuphetheni, ake sithi amagama ambalwa ngokuphila eyayisenhliziyweni yale ndoda. Okokuqala, siphawula ukuthi ushadile, futhi okwesibili. Unkosikazi wokuqala uVladimir Potanin - Natalia - wahlala naye cishe iminyaka engamashumi amathathu. Nokho, ngo-February 2014 yena lalimisa isehlukaniso ekuthatheni isinyathelo uVladimir, ngaleso sikhathi kwadingeka ubuhlobo eside ohlangothini. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa kwesehlukaniso, waphinde washada. Umkakhe lwamanje okuthiwa uCatherine, futhi wayesejele ngaphansi eyandulela wakhe iminyaka eyishumi nane. Ngokwazi siyazi, enendawo indodakazi, uBarbara, eyise kuyinto uVladimir Potanin. abantwana baKhe ukuba ibuye emshadweni wayo wokuqala - amadodana amabili nendodakazi - ngokuphathelene singawasekeli. Wenqaba ukushiya ifa labo ngemva kwesehlukaniso wenzalo yabo bancishwa umsebenzi isakhiwo ayo inzuzo. indodakazi uVladimir Potanin sika Anastasia nendodana Ivan angamaqhawe amaningi Russia Aquabike. Anastasia futhi kathathu iwine isihloko iqhawe emhlabeni ngalo mdlalo.
Potanin wathi ku IsiNgisi nesiFulentshi. ngesikhathi sokuphumula, ukhetha ukuba siphishekele esebenzayo ngakho wayevame ski resort, kanye nokudlala ibhola lomphebezo. Potanin uye wahambela. Ngaphezu kwalokho, uhlu esiyikhethayo esithandayo avele chess nemadomino. Ngo-2006, wathola isipiliyoni abasakazi. The kungenzeka ngokuthi uniké TNT siteshi asayine isivumelwano naye, owawuthi Potanin kwaba ukuqhuba ngokoqobo show "obengenele ukhetho".
Baranov Viktor Ivanovich - counterfeiter №1: Biography, empilweni yakho
Vietnam, Da Nang: ukubuyekezwa, incazelo kanye amaphuzu ezithakazelisayo
"Vumela bakhulume": impendulo yababukeli ekudlulisweni
"Eight Ngezansi." Abalingisi: abantu nezinja
Meaning of igama UYvette: kwebalingisi, incazelo, imvelaphi kanye ikusasa